तेस्रो दिन, परमेश्‍वरको वचनले पृथ्वी र समुद्रलाई जन्‍म दिन्छ, र परमेश्‍वरको अख्‍तियारले संसारलाई जीवनले भरिपूर्ण तुल्याउँछ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
यसपछि हामी उत्‍पत्ति १:९–११ को पहिलो वाक्यलाई पढौं: “अनि परमेश्‍वरले भन्‍नुभयो, वायुमण्डलमुनिको पानी एक ठाउँमा जम्मा होस् र सुक्खा भूमि देखा परोस्।” परमेश्‍वरले “वायुमण्डलमुनिको पानी एक ठाउँमा जम्मा होस् र सुक्खा भूमि देखा परोस्” भनी भन्‍नुभएपछि के-कस्ता परिवर्तनहरू आए? यो स्थानमा ज्योति र वायुमण्डल बाहेक के थियो? पवित्रशास्‍त्रमा यस्तो लेखिएको छ: “अनि परमेश्‍वरले सुक्खा भूमिलाई पृथ्वी; र एक ठाउँमा जम्मा भएको पानीलाई समुद्रहरू भन्‍नुभयो: अनि परमेश्‍वरले त्यो असल छ भन्‍ने देख्‍नुभयो।” भन्‍नुको अर्थ, त्यो स्थानमा अब भूमि र समुद्र थियो, र भूमि र समुद्र अलग गरिएको थियो। परमेश्‍वरको मुखबाट आएको आज्ञाद्वारा यी नयाँ कुराहरू देखा पर्‍यो, “अनि त्यस्तै भयो।” के यसो गर्ने क्रममा परमेश्‍वरले हतारमा गर्नुभयो भनेर पवित्रशास्‍त्रले व्याख्या गर्छ? के उहाँ शारीरिक परिश्रममा सहभागी हुनुभयो भनेर यसले व्याख्या गर्छ? त्यसो भए, परमेश्‍वरले कसरी यो गर्नुभयो त? परमेश्‍वरले कसरी यी नयाँ कुराहरू पैदा गराउनुभयो? स्पष्टै छ, यो सबै हासिल गर्न, यसको पूर्णता सृष्टि गर्नको लागि परमेश्‍वरले वचनहरू प्रयोग गर्नुभयो।
अघिल्लो: दोस्रो दिन, परमेश्‍वरको अख्तियारले पानीलाई व्यवस्थित पार्छ, र वायुमण्डल बनाउँछ, र मानव अस्तित्वको लागि सबैभन्दा आधारभूत ठाउँ देखा पर्छ
अर्को: चौथो दिन, परमेश्‍वरले फेरि आफ्‍नो अख्तियार प्रयोग गर्नुहुन्छ र मानवजातिका ऋतु, दिन, र वर्षहरू अस्तित्वमा आउँछन्